Andian-tsarimihetsika fahitalavitra tsara indrindra amin'ny taona 2018: inona izy ireo sy ny heviny | Omeo fialamboly aho
Hatramin'ny fipoahan'ny sehatra streaming, dia miharihary votoaty marobe avy amin'ny andiany amin'ny Internet sy fahitalavitra izahay. Androany izy ireo dia nanjary iray amin'ireo fiankinan-doha lehibe ary sarotra kokoa ny misafidy ny lohateny hampiasanao vola amin'ny fotoananao. Misy sehatra samihafa izay misy atiny kalitao. Netflix, Amazon Prime ary HBO dia telo amin'ireo sehatra mitarika amin'ity karazana atiny ity. Ato amin'ity lahatsoratra ity no asehoko ireo lisitra miaraka amin'ireo dimy andiany tsara indrindra amin'ny taona 2018 amin'izy rehetra. Ahitana tranofiara!
Ny fisafidianana dia mifototra amin'ny haavon'ny mpihaino ny andiany misy sy ny vanim-potoana samihafa.
1.1 1. Ny Tranon-taratasy
1.2 2. Karama efa niova
1.3 3. Ireo tovovavy tariby
1.4 4. 13 Antony Nahoana
2.1 1. Goliata
2.2 2. Ilay Lehilahy ao amin'ny lapa avo
2.3 3. Mangarahara
2.4 4. Amerikanina
3.2 2. Ny tantaran'ny ankizivavy
3.3 3. Lainga kely lehibe
3.4 4. Fikarohana marina
Io no sehatra be mpampiasa indrindra ary natomboka tamin'ny 2010. Izy io dia ekena ho toy ny sehatra streaming voalohany miaraka amina famoahana faobe mahomby. Azo zahana amin'ny ankapobeny eran'izao tontolo izao ankoatra an'i Shina (tsy misy an'i Hong Kong sy Macao), Syria ary Korea Avaratra.
Ireto ny andiany izay tsy azonao adino:
1. Ny Tranon-taratasy
Izy io dia ekena ho andian-dahatsoratra tsy anglisy miteny ambony indrindra amin'ny tantaran'ny Netflix. Miorina amin'ny a fandrobana ny National Mint and Stamp Factory, nomanin'ny "The Professor." Mitovy amin'ny fanangonana ekipa mpanao heloka bevava amin'ny sehatra samihafa. Samy manana solon'anarana isika tsirairay, hitantsika ao Tokyo, Berlin, Nairobi, Moskoa, Rio, Denver ary Helsinki nofonosina ao anaty drafitra iray izay handray fiovana tsy ampoizina izay ilana hanamboarana ny tanjona.
Mahita takalon'aina izahay, mpirakidraharaha, polisy ary hetsika marobe izay hitazonana anao ho eo amoron'ny sezanao hatramin'ny farany.
2. Karama efa niova
Amin'ny ho avy lavitra, ny fiarahamonina dia novain'ny teknolojia tanteraka. Amin'izay ny olona mandà ny fivavahana dia afaka miatrika fotoana sy tsy mety maty amin'ny fomba iray, ary ny implant izay misy ny fampahalalana rehetra momba ny fahatsiarovana sy ny feon'ny fieritreretan'ny tsirairay dia voatahiry tsara. Ny implant dia apetraka ao amin'ny hazondamosin'ny vozona ary apetraka amin'ny vatan'olombelona izay azo ovaina ary mihetsika ho "fonony".
Ny maherifo dia i Takeshi Kovacs, miaramila mpikomy taloha izy izay novidiana sy "natsangana tamin'ny maty" taorian'ny taonjato maro nataon'ny iray tamin'ireo lehilahy matanjaka indrindra nirahina hanao iraka manokana. Ny valiny: fahalalahana sy harena!
Manaiky i Kovacs, mandeha miasa, ary mahita fahamarinana tsy ampoizina momba ny fiainany.
3. Ireo tovovavy tariby
Napetraka tamin'ny taona 20, ny andiany mitantara ny tantaran'ny namana efatra izay mifankahalala amin'ny fiasana ho mpandraharaha telefaona ao amin'ny orinasam-pifandraisan-davitra manan-danja indrindra amin'izao fotoana izao ao Madrid. Ny tsirairay amin'ireo mpihetsiketsika dia mahatsapa fa voafandrika amin'ny lafiny fianakaviana sy sosialy samihafa. Izy ireo dia manolo-tena amin'ny fandikana ny paradigma mikasika izay antenain'ny fiarahamonina amin'izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany a telolafy fitiavana eo anelanelan'ny mpilalao fototra, ny malalany tamin'ny fahazazany ary ny tompon'ny orinasa. Manodidina azy ireo dia misy tantara an-tsehatra tsy misy farany feno fikorontanana, fitiavana be fitiavana ary famadihana. Ny vanim-potoana faharoa dia manana fiandohana tsy ampoizina izay mametraka ny fahalalahan'ny mpihetsiketsika amin'ny loza satria afaka mihevitra ny tenany ho mpiray tsikombakomba amin'ny famonoana olona izy ireo.
4. 13 Antony Nahoana
Ny tantaran'i Hanna Baker dia mbola tsy vita tamin'ny vanim-potoana faharoa dia momba ny fanenjehan'ny ray aman-dreniny an'i Liberty High. Mandritra ny fotoam-pitsarana dia misy tsiambaratelo hita fa mangovitra olona mihoatra ny iray. Ity vanim-potoana ity dia miseho ho toy ny fitaovana fanadihadiana ny sary
Ny fiankinan-doha, famonoan-tena, firaisana ara-nofo, fampiasana fitaovam-piadiana ary firaisana ara-nofo no mitohy ho lohahevitra lehibe amin'ity andiany ity. Omano ny vavoninao amin'ny toko sasany izay misy seho matanjaka be.
Izy io dia mampihetsi-po ara-tsaina amin'ny fizarana folo izay mandrafitra ny andian-tantara napetraka tamin'ny taonjato faha-XNUMX tany New York ary mpilalao an'i Dakota Fanning, Daniel Brühl ary Luke Evans. Nahita a Mpamono olona ara-dalàna izay mamono olona mahatsiravina. Ny kaomisera dia manokatra tranga iray izay anaovan'ny mpanao gazety fanadihadiana azy miafina, ny sekretera ao amin'ny departemantan'ny polisy ary ny psikology momba ny heloka bevava. Ity farany fantatra amin'ny anarana hoe "ny vahiny" dia mandalina ny patolojia sy ny fitondran-tena mivaona amin'ny olona izay ivelan'ny tenany.
Ny sehatra fivarotana an-tserasera voalohany dia nanapa-kevitra ny hanitatra ny orinasany ary fandefasana ny kinova Prime amin'ny 2017. Aorian'izay dia asehoko ny andiany tsara indrindra natolotry ny Amazon Prime Video:
Mitantara ny tantaran'i Billy Mcbride, a mpisolovava izay voaroahan'ny orinasa nanampy azy nahita. Billy lasa mpiaro mediocre ary latsaka tao anaty alikaola. Taty aoriana dia asaina hiditra a ady ara-dalàna amin'ny orinasa taloha ary manana fotoana hanavotana ny tenanao ianao. Ny vanim-potoana faharoa dia manery azy hampihatra lalàna indray mba hanampiana ny zanakalahin'ny sakaizany, izay ampangaina ho fiampangana vonoan'olona indroa. Nandritra ny teti-dratsy ny tanànan'i Los Angeles dia nahita fikomiana lehibe.
2. Ilay Lehilahy ao amin'ny lapa avo
Manana vanim-potoana roa misy izy ary ny fahatelo hivoaka amin'ny taona 2018. Ny teti-dratsy mitantara ny toe-javatra nisy ny Ady Lehibe Faharoa izay tsy nandresen'ny Allies. Diniho ny zava-misy hafa noho ny an'izao tontolo izao ankehitriny izay i Etazonia dia mizara ho faritra fehezin'ny Nazis sy ny Japoney. Nandresy tamin'ny ady i Hitler!
Hatsikana mampihomehy amerikanina izay milaza ny fanovana transgender ho an'ny be antitra: Mort lasa Maura Pfefferman. Ny teti-dratsy dia mahatafiditra ny fianakaviana iray manontolo izay misy zanaka mihevi-tena telo sy vady taloha.
Mangarahara dia Amazon Series's Series nahazo loka indrindra: Nahazo mari-pankasitrahana ho an'ny andiany hatsikana tsara indrindra sy mpilalao sarimihetsika nandritra ny Golden Globes faha-72. Hatreto dia efa nisy fizaran-taona efatra, ny voalohany dia nanomboka tamin'ny 2014.
Shadow Moon, jiolahy iray izay navotsotra avy tany am-ponja ary miatrika ny fahafatesan'ny vadiny. Ao amin'ny tontolo tsy azony dia mihaona amin'i Andriamatoa Wednesday izay manolotra asa ho mpanampy sy mpiambina azy izy. Shadow dia ao amin'ny tontolo hafa misy ny majia ary mahita andriamanitra taloha isika izay matahotra ny tsy hanan-danja noho ny haitao sy ny andriamanitra vaovao.
Nivoaka ny fonja i Marius ary manao tahaka ny namany antsoina hoe Pete. Mihaona amin'ny fianakavian'i Pete tena izy ary mahita olana lehibe izay hiatrehany koa. Tsy mahita izany ny fianakaviana vaovao ary manohy ny fiampangana azy izy.
Manolotra lohatenin'ny andian-tantara amerikanina ny fantsona fahitalavitra tariby voalaza. Ny fandefasana azy tany Espana dia tamin'ny Novambra 2016 niara-niasa tamin'i Vodafone ary manana fomba roa ao amin'ny firenena izy:
HBO: atiny tsy tapaka ho an'ny ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe manana atiny andian-tsarimihetsika sy sarimihetsika amin'ny karazany rehetra
HBO Family: Natokana manokana ho an'ny mpihaino ankizy sy tanora. Ny atiny dia mety amin'ny sokajin-taona rehetra
Dimy amin'ireo andian-tantara tsara indrindra amin'ity taona 2018 ity no voalaza etsy ambany:
Izy io dia iray amin'ireo andiany nahomby indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy izay misy haavo tsara amin'ny mpihaino. Amin'ny vanim-potoana fahavalo ka hatramin'ny premiere amin'ny 2019, dia mahita mandrakizay isika miady eo amin'ny fianakaviana mendri-kaja hanjakan'ny fanjakana fito ary haka ny seza fiandrianana vy. Ny anarana farany Stark, Baratheon, Lannister, Targaryen, Greyjoy, Tully ary Arryn dia manana endri-tsoratra manome ny andian-dahatsoratra iray miavaka sy noforonina noforonina. Ho setrin'izany, samy manana ny White Walkers ho fahavalo iraisana izy ireo. Azo antoka fa andian-tantara izay tsy azonao adino!
Tonga ara-potoana ianao hahatratra alohan'ny premiere vanim-potoana farany amin'ny 2019.
2. Ny tantaran'ny ankizivavy
Ny andiany vaovao sy ankafizina dia momba ny tantaran'i Offred, vehivavy miasa andevo ara-nofo. Ny tantara dia mivelatra ao a fiaraha-monina noforonina sy tsy dia misy mponina intsony izay ny vehivavy dia raisina ho fananan'ny fanjakana. Vitsy ny vehivavy mahavokatra, izay voatery manompo fianakaviana manankarena ary miteraka zaza hampitombo ny isan'ny mponina. Ny mahery fo dia mitolona amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fitondrana ary mamerina zazalahy nalaina taminy.
Hisokatra amin'ny Jolay 2018 ny vanim-potoana faharoa ary mampanantena ny hiteraka resabe.
3. Lainga kely lehibe
Miaraka amin'ny mpilalao sarimihetsika mahafinaritra nataon'i Nicole Kidman, Reese Whiterspoon ary Shailene Woodley, mifototra amin'ny vehivavy mpikarakara tokantrano telo toa tonga lafatra. Miharihary ny scandals sosialy covert ary misy ifandraisany ireo mpandray anjara mavitrika ao a famonoana olona
Ny andiany dia nokasaina ho andian-dahatsoratra kely ary nipaoka ny mari-pankasitrahana guild tamin'ny taona 2017. Nankalazaina tokoa ity andiany ity fa ny vanim-potoana faharoa hidiran'i Meryl Streep dia eo am-piasana.
4. Fikarohana marina
Nalefa tamin'ny 2014, True Detective dia manasongadina a Tantara famotopotorana ataon'ny polisy miaraka amin'ireo mpilalao mahaleo tena isaky ny vanim-potoana. Ny tsikombakomba tsirairay dia mihodina manodidina tranga famonoana olona: Ny vanim-potoana 1 dia aingam-panahy avy amina mpamono olona iray nihaza nandritra ny 17 taona, raha ny vanim-potoana 2 dia niainga tamin'ny famonoana mpanao politika mpanao kolikoly tany California.
Tamin'ny volana aogositra 2017, vanim-potoana fahatelo no nambara ary mbola hamokatra.
Westworld dia a Valan-javaboary futuristic izay tantanan'ny mpampiantrano manokana: robot. Ny tanjon'ny valan-javaboary dia mankafy ny nofinofin'ny mpitsidika rehetra amin'ny alàlan'ny fahatsiarovan-tena artifisialy ao anatin'ny tontolon'ny West American taloha. Ny mpitsidika dia afaka manao nofinofy, anisan'izany ny fihetsika tsy ara-dalàna toy ny famonoana olona sy fanolanana.
Manana andiany roa ity andiany ity ary misy an'i Anthony Hopkins amin'ireo mpilalao ao aminy, ary koa Evan Rachel Wood sy Ed Harris.
Araka ny ho hitanao dia efa anananao Lohateny 15 voasokajy ho mahomby amin'ny taona 2018 ary ny fisafidianana azy dia an'ny karazana karazany. Eny eny! Ankafizo ireto ora manaraka ireto miaraka amin'ny antoka fa mendrika izany ny safidinao.
Raha izao, raha efa hitanao ny andian-tantara rehetra na mila mahita safidy hafa dia azonao atao ny mijery ireo katalaogin'ny sehatra streaming hafa toa ny Movistar +, Rakuten TV, Filmin, YouTube TV na Hulu. Manantena izahay fa tianao ity lisitr'ireo andian-tsarimihetsika fahita lavitra indrindra amin'ity taona ity!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » General » Andian-tsarimihetsika fahitalavitra tsara indrindra amin'ny taona 2018